အသံကိရိယာများ - IBC688 @ ၆၈၈ နှင့် SL-6 တို့ဖြစ်သည်။ | NAB သတင်းများ | 2015 NAB Show Media Partner နှင့် NAB Show LIVE ၏ထုတ်လုပ်သူ။ အသံလွှင့်အင်ဂျင်နီယာသတင်း
ပင်မစာမျက်နှာ » 2015 IBC ပြရန် » အသံဖုန်းများအတွက်: မြေပြင်-ခြိုးဖောကျ 688 နှင့် SL-6 @IBC2015!
အသံဖုန်းများအတွက်: မြေပြင်-ခြိုးဖောကျ 688 နှင့် SL-6 @IBC2015!
အဆိုပါအထင်ကြီးမည်ဖြစ်သည် 688 အသစ်ကအတူ 12-လမ်းကြောင်းခရီးဆောင်ရောနှော / အသံဖမ်း SL-6 မှာအာဏာနှင့်ကြိုးမဲ့စနစ်က IBC2015! အဲဒီနှစျခုထုတျကုနျ၏တွဲဖက်မှုဆက်ဆက်ချောမွေ့ပါလိမ့်မယ်နှင့်အော်ပရေတာတစျခုကြိုးမဲ့တည်နေရာတစ်ဦးထံမှတစ်ခုလုံးကိုအသံစနစ်ကထိန်းချုပ်စောင့်ကြည့်နိုင်စွမ်းအားငါပေးမည်!
အဆိုပါ 688 (ထိုခဲယဉ်းနှိပ် 6-စီးရီးဒီဇိုင်းကိုမိသားစုတစ်စု၏နောက်ဆုံးပေါ်အဖွဲ့ဝင်) multi-ရုပ်သံလိုင်းရောနှော, အသံဖမ်း, auto-ဖော်စပ်ကနေတဆင့်ထည့်သွင်း MixAssist ™ နည်းပညာ။ MixAssist အဆိုပါ 688 12-ရုပ်သံလိုင်း Auto-ရောစပ်စွမ်းရည်ကယ်လွှတ်ခြင်းငှါခွင့်ပြုတဲ့အင်အားကြီးဒစ်ဂျစ်တယ်အပြောင်းအလဲနဲ့အင်ဂျင်ဖြစ်ပါတယ်။ စျေးကွက်အပေါ်အများဆုံးခေတ်မီ algorithm ကိုယနေ့ MixAssist အသုံးပြုခြင်း အလိုအလျှောက်လှုပ်ရှားသွင်းအားစုများ၏အဆင့် attenuates နှင့်မသက်ဆိုင်ပွင့်လင်းမိုက်ခရိုဖုန်းများ၏အရေအတွက်တသမတ်တည်းနောက်ခံအဆင့်အတန်းကိုထိန်းသိမ်းထား! ဖြီး filtering နှင့် phasing အပိုငျးအကိုလည်းအသိဥာဏ်တူညီသောအော်ဒီယို signal ကိုလက်ခံရရှိမိုက်ခရိုဖုန်း attenuating လျှော့ချနေကြသည်။ အဆိုပါ 688 SD နှင့်CompactFlash®ကတ်များမှ 16-လမ်းကြောင်း, မြည်သည့်တီးလုံး Polyphonic သို့မဟုတ် monophonic ထုတ်လွှင့်နဲ့ WAV နှင့် MP3 file ကိုမှတ်တမ်းတင်ပေးထားပါတယ်။ အားလုံးဘုံနမူနာနှုန်းထားများအထိခြောက်လပုဒ်ပေါ် 192 kHz အပါအဝင်ထောက်ခံနေကြသည်။ အဆိုပါ 688 အပေါ်ပြည့်စုံ metadata ကိုတည်းဖြတ်, အသံအစီရင်ခံစာဖန်ဆင်းခြင်း, Ambient ™အချိန်-code ကိုမီးစက်နှင့်စာဖတ်သူ, Two-ဒုတိယပါဝါတပ်ဆင်ထားခြင်းနှင့် QuickBoot ™နှင့် PowerSafe ™, ဒေတာများဆုံးရှုံးမှုဆန့်ကျင်ကာကွယ်စောင့်ရှောက်ဖို့ built-in 10-ဒုတိယပါဝါအရံနှင့်အတူမှတ်တမ်းတင် အမှတ်တမဲ့ပါဝါဆုံးရှုံးမှုကြောင့်။
"ကျနော်တို့ကအတူတကွ IBC မှကျွန်တော်တို့ရဲ့ဆန်းသစ် SL-688 ဆက်စပ်ပစ္စည်းနှင့်တကွ,6အတွက်ရရှိနိုင်အာဏာအရှိဆုံးခရီးဆောင်ရောနှော / အသံဖမ်းရောက်စေဖို့ဝမ်းသာပီတိဖြစ်ကြောင်း" Matt Anderson တို့၏ CEO ဖြစ်သူကပြောပါတယ် အသံဖုန်းများအတွက်။ "SL-688 အတူ6ပါဝင်တဲ့တစ်ဦးကဖော်စပ်အိတ်ပေါင်းတစ် SuperSlot-သဟဇာတ wireless receiver ကိုနောက်ဆုံးမှာအာဏာကိုဖြန့်ဖြူးခြင်းနှင့်အပြန်အလှန်ဆက်သွယ်မှု simplifying လုံးကိုရောနှောထံမှအသံရောစပ်, မှတ်တမ်းတင်ခြင်းနှင့် wireless receiver ကိုထိန်းချုပ်ပေးထားပါတယ်။ IBC တက်ရောက်ကျွန်တော်တို့ရဲ့မျိုးဆက်သစ်အသံဖမ်းခြင်းနှင့်ရောစပ်စွမ်းရည်သို့တစေ့တစောင်းရဖို့ပြပွဲကာလအတွင်းကျွန်တော်တို့ရဲ့ရပ်တည်ချက်အားဖြင့်ရပ်တန့်နိုင်ပါ။ "
အဆိုပါ optional ကို, ဒါပေမယ့်အလွန်အမင်းအကြံပြု, SL-6 အာဏာနှင့်ကြိုးမဲ့စနစ်အသုံး Dual-ရုပ်သံလိုင်းမှတက်လက်ခံ အဆိုပါ 688 များအတွက် slot က-သဟဇာတအသံဖမ်း။ အဆိုပါ SL-6 လိုအပ်အားလုံး powering, အသံအပြန်အလှန်ဆက်သွယ်မှုနှင့်ထိန်းချုပ်မှုကမ်းလှမ်း SuperSlot-compatible အသံဖမ်း။ မှတ်ချက်: SuperSlot စက်မှုလုပ်ငန်းရဲ့ပထမဦးဆုံး Non-စီးပွားဖြစ်, ပွင့်လင်းကြိုးမဲ့ထိန်းချုပ်နှင့် interfacing စံအဖြစ်မှတ်ဖြစ်ပါတယ်။ အဆိုပါ SL-6 အလွယ်တကူ 688 ထိပ်တန်း panel ကိုတိုက်ရိုက်အလေးထားနှင့်လည်း built-in အင်တင်နာဖြန့်ဖြူးပေးထားပါတယ်။ ယင်း၏ NP1 ဘက်ထရီ slot က, USB အားသွင်းပေါက်နှင့်အတူ, နှစ်ခု 12-V ကိုအထီးကျန်ရလဒ်နှစ်ခု Non-အထီးကျန်တိုက်ရိုက်ဘက်ထရီရလဒ်, အ SL-6 ကိရိယာတစ်ခုစံပြ Power အချက်အချာဖြစ်ပါတယ်။
အားဖြင့်ရပ်တန့်ပါလျှင် IBC2015မှကိုကျော်ဦးရန်သေချာစေပါကျေးဇူးပြုပြီး ခန်းမ 8, ရပ် 8.B59 တဦးတည်း၌ဤသဲတစျခုလုံးကိုအသံစနစ်၏သင့်ကိုယ်ပိုင်ပုဂ္ဂိုလ်ရေးသရုပ်ပြများအတွက်!
1998 ခုနှစ်တွင်စတင်တည်ထောင်ခဲ့ပြီး, အသံဖုန်းများအတွက်, LLC ဒီဇိုင်းများနှင့်အဘို့နှစ်ခုလုံးထုတ်ကုန်တွင်လည်းထုတ်လုပ် အသံဖုန်းများအတွက်'' အသံထုတ်ကုန်များနှင့်ဗီဒီယိုဖုန်းများအတွက် 'သည်ဗီဒီယိုထုတ်လုပ်ပါတယ်။ အသံဖုန်းများအတွက် အင်္ဂါရပ်ရုပ်ရှင်, Episode ရုပ်မြင်သံကြားမှတ်တမ်းရုပ်ရှင်, သတင်း-စုဝေး, တိုက်ရိုက်ထုတ်လွှဖြစ်ရပ်နှင့်အသံစမ်းသပ်မှုနှင့်တိုင်းတာခြင်း application များအတွက်ခရီးဆောင်အသံရောနှော, ဒစ်ဂျစ်တယ်အသံအသံဖမျးနှင့်ဆက်စပ်ပစ္စည်းကိရိယာများပေးထားပါတယ်။ ဗီဒီယိုကိုဖုန်းများအတွက်အစာရှောင်ခြင်း-ပွေးညီစတူဒီယို applications များ, တိုက်ရိုက်ထုတ်လွှအားကစား, တိုက်ရိုက်ထုတ်လွှဖြစ်ရပ်များ, နှင့်မိုဘိုင်းထုတ်လုပ်မှုအပါအဝင်မျိုးစုံ-Source ကိုဗီဒီယိုထုတ်လုပ်ရေး၏အကွာအဝေးဖြေရှင်းပေးသောဒီဂျစ်တယ်ဗီဒီယိုကိုမော်နီတာ, အသံဖမျးနှင့်ဆက်စပ်ပစ္စည်းများ, ပေးထားပါတယ်။ အဆိုပါ အသံဖုန်းများအတွက်, LLC ဌာနချုပ် Madison, Wisconsin ပြည်နယ်နှင့်ဘာလင်, ဂျာမနီအတွက်အပိုဆောင်းရုံးများနှင့်အတူ Reedsburg, Wisconsin ပြည်နယ်အတွင်းတည်ရှိသည်။ ပိုမိုသိရှိလိုပါကအဘို့, သွားရောက်လည်ပတ် အသံဖုန်းများအတွက် နှင့် / သို့မဟုတ်ဗွီဒီယိုဖုန်းများအတွက်ဝက်ဘ်ဆိုက်များ: www.sounddevices.com နှင့် www.videodevices.com ။
ထုတ်လွှင့်အင်ဂျင်နီယာ ထုတ်လွှင့်အင်ဂျင်နီယာ တီဗီနည်းပညာ ဗီဒီယိုကိုအင်ဂျင်နီယာချုပ် 2015-08-11
ယခင်: ထုတ်လုပ်မှုမန်နေဂျာ - 1st ပြောင်းကုန်ပြီ
နောက်တစ်ခု: 2G ဒစ်ဂျစ်တယ်၎င်း၏အရောင်းရေးအဖွဲ့ကြီးထွားလာ